Black Magic: ဝါယာကို ရှော့တိုက်ကစားခြင်း
Posted by Black Magic | Posted in ဗဟုသုတများ | Posted on 3:24 AM
(ခေါင်းစဉ်ကို ဘာလို့ အဲလို ပေးထားမှန်းမသိပေမယ့် မူရင်း အတိုင်းပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.)
ဝါယာရှော့ ဖြစ်ပြီဆိုရင် လူတွေက မီးထတောက်မယ်၊ မီးပန်းတွေ ထဖြစ်မယ်၊ ဖြူးစ် (Fuse) လို ဘရိတ်ကာ (MCB, Over Current Breaker) လို အကာအကွယ် ဖြစ်စေမယ့် ပစ္စည်းတွေ မီးကို ဖြတ်ချပေးမယ်လို့ပဲ ထင်မြင်တတ်ကြပါတယ်။ ဝါယာရှော့ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ အများကြီးပါ။ အကြောင်းအရင်း မတူတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပွားပုံနဲ့ ခုနင်က အကာအကွယ်တွေ အလုပ်လုပ်ပုံတွေ မတူညီသလို ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရယ်တွေလဲ မတူပါဘူး။
ပလပ်ပေါက် (Socket Outlet) တစ်ခုမှာ ပလပ် (Plug) များစွာ တပ်ဆင် အသုံးပြုခြင်း။ ပုံမှန် အိမ်သုံး Socket Outlet တွေနဲ့ Plug တွေကို တပ်ဆင် အသုံးပြုရာမှာ အများဆုံး ခံနိုင်ဝန်အား ( ၁၃ အမ်ပီယာ - 13 A; Ampere) ကိုပဲ ခွင့်ပြုကြပါတယ်။ BS (British Standard) မှာတော့ 2, 5, 15, 30 A အထိ ခွင့်ပြုသတ်မှတ် သုံးစွဲတာကို တွေရပါတယ်။ #REF: CP-05; 553-01, Table 55A (L) တပ်ဆင် အသုံးပြုမယ့် ပစ္စည်းကိရိယာရဲ့ ဆွဲမယ့်ဝန်ကို မူတည်ပြီးတော့ Socket-Outlet နဲ့ Plug တွေကို ပုံသေ တွက်ချက် အသုံးပြုရပါတယ်။ Extension Cable အသုံးပြုတာ၊ Extension Socket လို့ခေါ်တဲ့ ပွားသုံးတာတွေကို ခဏတာ အသုံးပြုဖို့အတွက်ပဲ ခွင့်ပြုပါတယ်။ အမြဲတပ်ဆင် အသုံးပြုခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာ အသုံးပြုကြတဲ့ ပုံစံကတော့ ပလပ်ပေါက်တစ်ခုတွေ့ရင် စုပြုံထိုးကြတာပါပဲ။ ဒီကနေပြီးတော့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (၁) ဝန်ပိုအသုံးပြုခြင်း (Over Current) ပလပ်ပေါက်တစ်ခုအတွက် သွယ်တန်းထားတဲ့ ဝါယာကြိုး၊ ပလပ်ပေါက်ရဲ့ ခံနိုင်ရည်အား၊ ပလပ်ရဲ့ ခံနိုင်ရည်အား စတာတွေက များသောအားဖြင့် ၁၃ အမ်ပီယာ ခံနိုင်အောင် လုပ်ထားပေမယ့် အလွယ်တကူ နီးစစပ်ရာမှာ တပ်ဆင် အသုံးပြုကြတာကြောင့် ခံနိုင်ရည်အားကို ကျော်လွတ်ပြီးတော့ ဆွဲတတ်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုရရင် ပလပ်တစ်ပေါက်ထဲကနေ ကွန်ပြူတာရဲ့ မော်နီတာ၊ UPS၊ System၊ စတာတွေအပြင် ပန်ကာတို့ မီးပူတို့ ယူအသုံးပြုတာပါ။ ပလပ်တွေ ပလပ်ပေါက်တွေရဲ့ အတွင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြေးတွေနဲ့ အဆက်ဖြစ်တဲ့ မူလီ၊ စကူ (Screw) စတာတွေရဲ့ လျှပ်စီးခံနိုင်ရည်ထက် ပိုသုံးတဲ့အခါ ဒီနေရာတွေက ပူလာတတ်ပါတယ်။ ပုံမှန် ဒီပစ္စည်းတွေကနေ ထုတ်လွှတ်တဲ့ အပူချိန်ဟာ ၃၅ ကနေ ၄၀ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ်ထက် မပိုသင့်ပါဘူး။ ဒီခံနိုင်အားဆိုတာက ပလပ်တစ်ခုရဲ့ ခံနိုင်အားပါ အကာအကွယ်ဖြစ်တဲ့ Breaker နဲ့ ဖြူစ်တွေနဲ့ မဆိုင်တာကြောင့် အပေါ်က ခံထားတဲ့ ဒီပစ္စည်းတွေ မဖြတ်ချပဲနဲ့ ဒီပလပ်နဲ့ ပလပ်ပေါက်မှာ မီးထလောင်နိုင်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖြူစ်တွေ Breaker တွေက တစ်အိမ်လုံးစာ လိုင်းတစ်လိုင်းစာအတွက် တွက်ချက်ထည့်သွင်းထားတာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီပလပ်ပေါက်မှာ ဝန်ပိုနေပေမယ့် သူ့ရဲ့ ခံနိုင်ဝန်ထက် မကျော်သေးတာကြောင့်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ပြထားတဲ့ ပုံမှာဆိုရင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဝန်ပိုသုံးထားတဲ့အတွက် ပူပြီးတော့ ပျော်လာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းးတွေဟာ အပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ထုတ်လုပ်ထားပေမယ့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ နည်းမှားတစ်ခုနဲ့ အသုံးပြုခဲ့ရင်တော့ အပူလွန်ပြီး ဒီကနေပဲ မီးထလောင်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ရမှာကတော့။ ။ ပလပ်တစ်ပေါက်တည်းကနေ အများကြီး ခွဲသုံးဖို့ကို ရှောင်ရပါမယ်။ မဖြစ်မနေ အသုံးပြုရရင်လဲ တတ်ကျွမ်းနားလည်သူနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ ပုံသေ ပလပ်တွေ တပ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အများကြီး စုပြုံ အသုံးပြုမိရင်လဲ အပူလွန်နေမနေ စစ်ဆေးနေရပါမယ်။ (၂) လျှပ်စစ်ပစ္စည်းမှ ဝန်ပိုဖြစ်ခြင်း အိမ်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ ဝန်ပိုဆွဲခြင်း (Short-Circuit) ဖြစ်တာကြောင့်လဲ ပလပ်နဲ့ ပလပ်ပေါက်မှာ အလွန်အကျွံ ဝန်ဆွဲပြီးတော့ ခုနင်ကလို မီးလောက်ကျွမ်းတာတွေလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အခုနောက်ပိုင်း ပလပ်နဲ့ ပလပ်ပေါက်တွေမှာ ဝန်ထိန်းပေးမယ့် Fuse လေးတွေ တပ်ဆင်ထားတာတွေ ရှိနေပါပြီ။ ဒါမျိုးတွေကို ရွေးချယ် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခု ဝန်ပိုဖြစ်လို့ ရှော့ဖြစ်ရင် ဒိဖြူးစ်လေးက ပြတ်သွားပြီးတော့ အန္တရယ်ကို ရှောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ (၃) မထိတထိဖြစ်ခြင်း၊ အံမဝင်ခြင်း ပလပ်ပေါက်တစ်ခုတည်းကို ပလပ်ပေါင်းများစွာ စုပြုံထိုးပြီးတော့ အသုံးပြုတဲ့အခါ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ထောက်နေတာ၊ အခုအခံဖြစ်နေတာတွေကြောင့် ထိထိမိမိ မဖြစ်တဲ့အခါတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခါမှာ ပလပ်နဲ့ ပလပ်ပေါက် အတွင်းက ကြေးသားတွေမှာ အပူလွန်ကဲလာပြီးတော့ မီးထလောင်တတ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးဟာ ဝန်ပိုဆွဲတာ မဟုတ်တော့ Breaker နဲ့ Fuse တွေကနေ အကာအကွယ် ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံး မီးလောက်ပြီး အထိန်းတွေဖြစ်တဲ့ PVC တွေ လောင်ကျွမ်းမီးလောင်ပြီးတော့ ဝါယာနှစ်ခုပူးမှသာ ဒီအကာအကွယ်တွေက အလုပ်လုပ်မှာပါ။ ဒိအချိန်က အလွန်နောက်ကျနေလောက်ပါပြီ။ နောက်တစ်ခုက ပလပ်တွေ စုပြုံထားတဲ့အတွက် တစ်ခုနဲပတစ်ခု ငြိနေတာမျိုး ချိတ်နေတာမျိုးတွေကြောင့်လဲ ပလပ်ရဲ့ အမာခံ ခေါင်းနဲ့ ကြိုးအဆက်နေရာတွေမှာ ဒဏ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိ ဒဏ်ဖြစ်တဲ့နေရာထဲက ဝါယာနှစ်ခု မထိတစ်ထိဖြစ်ရာကနေလဲ မီးလောင်နိုင်စေပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ရမှာက။ ။ ပလပ်တပ်တဲ့အခါ ထိထိမိမိရှိပါစေ။ ဝါယာတွေကို ရှုပ်ထွေးမနေစေပဲနဲ့ ရှင်းလင်းသပ်ရပ်အောင် ဂရုစိုက်စေလိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အထူးသဖြင့် အသုံးပြုနေတာတွေက (2 Pin Plug) လို့ခေါ်တဲ့ နှစ်ငုတ် ခေါင်းတွေပါပဲ။ ခေါင်းလုံးနဲ့ ခေါင်းပြားဆိုပြီးတောင် ကွဲပါသေးတယ်။ များသောအားဖြင့် ခေါင်းပြား နှစ်ငုတ်တွေကို သုံကြပါတယ်။ ဒါတွေက ပိုပြီးတော့ မမိတာတွေ မထိတထိဖြစ်တာတွေကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မယ် ဘယ်လို ပလပ်ကိုပဲ သုံးရမယ်ဆိုတဲ့ စံမရှိတာကြောင့် ဒီပြဿနာတွေ ဖြစ်နေတာပါ။ နောက်ဆုံး ပလပ်တွေအကြောင်း နိဂုံးချုပ်ရရင်တော့ ကိုယ်တပ်ထားတဲ့ ပလပ်က ထိထိမိမိဖြစ်ပါစေ၊ အပူချိန် လွန်နေသလား အမြဲ ဂရုစိုက်ပါ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် (3 Pin Plug) တွေ သုံးပါ။ နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်အမြဲသုံးမယ့် ပစ္စည်းတွေအတွက် ပုံသေ ပလပ်ပေါက်များ တပ်ဆင် အသုံးပြုကြပါလို့။ လျှပ်စစ်အကြောင်း တိတိပပ မသိသေးသူများအတွက် ဦးတည်းရေးပါသည်။ Don't Monkey with Electricity...!!!